Mirrors Nepal » गरे के हुन्न ? : तरकारी खेतीबाटै कारमा सरर !
६ फाल्गुन २०७४ |
गरे के हुन्न ? : तरकारी खेतीबाटै कारमा सरर !
६ फाल्गुन २०७४, आईतवार ०९:३४
खेतीकिसानीबाट कार किन्न सम्भव छ ? छ। कालिकोटका पौरखी किसानले कृषि बालीबाट आर्जन गरेको कमाइले गाडी किनेका छन्।
खाँडाचक्र नगरपालिका– ४ बद्रीगाउँका पौरखी किसानहरूले तरकारी बेचेर नै कारलगायतका सवारीसाधन जोडेका छन्। आलु, गोलभेंडा, काउली, गाजर, प्याजलगायतका तरकारीको आम्दानीले उनीहरूले सवारी साधनका पनि मालिक बनेको खबर आजको कारोबार दैनिकमा रमेश रावलले कालीकोटबाट लेखेका छन्।
खाँडाचक्रका हरिचन्द्र आचार्य, ठम्म आचार्य, ऋषि आचार्य र प्रकाश आचार्यलगायतका किसानले आफ्नै बारीमा लगाएको तरकारी बेचेर सवारी साधन किनेका हुन्। हरिचन्द्रले आफ्नो लागि मात्रै जीप किनेका छैनन्, उनले सार्वजनिक भाडाको लागि समेत जीप किनेका छन्। ठम्मले त झन् दुईवटा निजी जीप किनेका छन् भने र ऋषिले र प्रकाशले एक–एकवटा गाडी किनेका छन्।
यस्तै, बद्रीगाऊँका अन्य आठ जना किसानले पनि ट्याक्टर, ट्रकलगायतका सवारी तथा ढुवानीका साधन किनेका छन्। उनीहरू तरकारीको आम्दानीबाटै कार चढ्ने हैसियतमा पुगेका हुन्। बद्रीगाउँका तरकारी किसानहरूले जीप कारमा हैन् सदरमुकाममा मान्मलगायतका सहरहरूमा ठूलाठूला घरसमेत बनाएका छन्। प्रायले किसानहरूको सुर्खेत र नेपालगञ्जजस्ता सहरमा घर–घडेरीसमेत जोडेका छन्। कर्णालीमा सडक नपुगुञ्जेल गाउँमा तरकारी उत्पादन गरेर २ घण्टाको पैदल दूरीमा मान्म बजार डोको तरकारी बोकेर बिक्री गर्ने बद्रीगाउँका किसानहरू अहिले पनि त्यही पेसामा निरन्तरता दिएका छन्।
गाउँबाट बजारसम्म अहिले पनि बिहानै तरकारी बेच्नका लागि जाने गरेको बद्रीगाउँका किसान धनप्रसाद आचार्यले बताए। ‘गाउँमा तरकारी नलाउने मान्छे नै छैनन्, प्रत्येक दिन बिहानै तरकारी बेच्न गाउँलेहरू बिहानै बजारमा जाने गरेका छन्,’ उनले भने।
आचार्य थरका ५१ घरधुरी रहेको बद्रीगाउँमा तरकारी बेचेर नै सबै घरपरिवारले खाँडाचक्र नगरपालिकाको मान्म बजारमा सबै जनाले घर बनाएको स्थानीय भानुभक्त आचार्यले बताए। ‘गाउँका ५१ जानको घर मान्ममा बजारमा बनाएका छन्, तरकारी नलगाउने एक जना पनि गाउँमा भेटिदैन। सबैले मान्म बजार देशका अन्य सहरमा घर घडेरी जोडेका छन्,’ उनले भने।
जिल्ला सदरमुकाम मान्मबजारमा बिगतदेखि नै तरकारीको व्यापार गर्ने गरेका गाउँका सबै घरपरिवारका छोराछोरी सहरमा महङ्गा बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने गरेको स्थानीय हरिचन्द्र आचार्यले बताए। ‘हाम्रो गाउँमा कोही पनि कमजोर घरपरिवार छैनन्,’ उनले भने, ‘तरकारी बेचेर नै कोही कार र जीप चढ्छन्। सबैका देशमा बिभिन्न सहरमा घर घडेरी समेत बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘यो गाउँका कसैका छोराछोरी निजी स्कुलमा पढ्दैनन्। सबैका छोराछोरी सहरमा महँगा बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने गरेका छन्।’
बजार छ भने गाउँमा नै मेहेनत गरेर सुन फलाउन सकिने रहेछ भन्ने उदारणमा रूपमा बद्रीगाउँलाई लिन सकिने स्थानीय गणेश आचार्यले बताए। विगतमा गाउँमा अन्य बाली लगाएर वर्षभरी खान समेत धौ–धौ हुने गरेको र रोजगारीका लागि अन्य ब्यवसाय अगाल्नु पर्ने अबस्था रहेकोमा बिगत एक दशकदेखि गाउँमा नै सबैले तरकारी खेती गर्न थालेपछि गाउँका सबै मानिसको अहिले कुनै समस्या नरहेको स्थानीय परमानन्द आचार्यले बताए।
गाउँमा उत्पादन हुने तरकारी बेच्नका लागि मान्मबजारमा १० जनाभन्दा बढी किसानहरूले तरकारी ब्यवसाय समेत सुरु गरेको स्थानीय भवानी आचार्यले बताए।